Ny hafatr'i Jesosy | Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra eran'izao tontolo izao Soisa, Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Malagasy > Mazava ho azy fa ny Baiboly > Ny hafatr'i Jesosy
Ny filazantsara no vaovao mahafaly momba ny fanavotana amin'ny alàlan'ny fahasoavan'Andriamanitra miorina amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy. Ny hafatra dia hoe i Kristy dia maty noho ny fahotantsika, nalevina izy, natsangana tamin'ny andro fahatelo aorian'ny Soratra Masina, ary avy eo dia niseho tamin'ny mpianany. Ny filazantsara no vaovao mahafaly izay ahafahantsika miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny asa famonjena an'i Jesosy Kristy (1 Korintianina 15,1: 5-5,31; Asan’ny Apostoly 24,46:48; Lioka 3,16: 28,19-20; Jaona 1,14:15; Matio 8,12: 28,30-31; Marka; Asan’ny Apostoly;-).
Jesosy dia nilaza fa ny teny nolazainy dia tenin'ny fiainana (Jaona 6,63). "Ny fampianarany" dia avy amin'Andriamanitra Ray (Jaona 3,34; 7,16; 14,10), ary ny faniriany ho velona amin'ny mpino ny teniny.
I John, izay tafavoaka tamin'ny apôstôly hafa dia nilaza izao fampianaran'i Jesosy izao: “Izay mihoatra noho ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana Andriamanitra; Izay mitoetra ao amin'ity fampianarana ity dia manana ny ray sy ny zanany » (2 Jaona 9).
"Fa ahoana kosa no antsoinao hoe Tompoko, Tompoko, nefa tsy manao izay lazaiko aminao", hoy i Jesosy (Lioka 6,46). Ahoana no ahafahan'ny Kristiana milaza fa milefitra amin'ny fanjakan'i Kristy nefa tsy miraharaha ny teniny? Ho an'ny Kristiana, ny fankatoavana dia miantefa amin'i Jesosy Kristy Tompontsika sy amin'ny filazantsarany (2 Korintiana 10,5: 2; 1,8 Tesaloniana).
Ao amin'ny Toriteny eo an-tendrombohitra (Matio 5,1: 7,29, 6,20:49; Lioka,) Nanomboka tamin'ny fanazavany ireo toetra ara-panahy tokony eken'ny mpanaraka azy an-tsitrapo i Kristy. Ireo mahantra ara-panahy izay voakasiky ny fahorian'ny hafa ka mitomany; ny malemy fanahy, noana sy mangetaheta ny fahamarinana, ny mpamindra fo, ny madio am-po, ny mpampihavana izay enjehina noho ny fahamarinana - manan-karena ara-panahy sy voatahy ny olona toy izany, izy ireo no "mason'ny tany" ary manome voninahitra ny Ray izy ireo any an-danitra (Matio 5,1: 16).
Nampitahain'i Jesosy avy eo ny toromarika rehetra momba ny Testamenta (izay voalaza tamin'ny taloha) miaraka amin'ny zavatra lazainy amin'ireo izay mino azy ("Fa lazaiko aminao"). Mariho ireo fitenin'ny fampitahana ao amin'ny Matio 5,21: 22-27, 28-31, 32-38, 39-43, ary 44.
Mampiditra an'io fampitahana io izy amin'ny filazany fa tsy tonga handika ny lalàna izy fa hanatanteraka izany (Matio 5,17). Araka ny noresahina tao amin'ny Fianarana Baiboly 3, i Matio dia mampiasa ny teny hoe "fanatanterahana" amin'ny fomba ara-paminaniana, fa tsy amin'ny heviny hoe "mitazona" na "mandinika". Raha tsy nahatanteraka ny taratasy kely rehetra sy ny teboka rehetra nampanantenaina an'i Jesosy i Jesosy, dia ho fitaka izy. Izay rehetra voasoratra tao amin'ny lalàna sy ny mpaminany ary ny soratra masina [Salamo] mifandraika amin'ny Mesia dia mila mahita fahatanterahany ara-paminaniana ao amin'i Kristy (Lioka 24,44).
Ho antsika, tena ilaina ny tenin'i Jesosy. Ao amin'ny Matio 5,19 izy dia miresaka momba "ireo didy ireo" - "ireo" dia mifandraika amin'ny zavatra ampianariny, mifanohitra amin'ny "ireo" izay mifandraika amin'ireo didy izay napetraka teo aloha.
Ny fijeriny azy no ivon'ny finoana sy fankatoavana ny kristiana. Nampiasa ny fampitahana i Jesosy, dia nandidy ny mpanara-dia azy hankatò ny lahateniny fa tsy hampiditra lafiny amin'ny Lalàn'i Mosesy izay tsy ampy (Ny fampianaran'i Mosesy momba ny famonoana, fanitsakitsaham-bady, na fisaraham-panambadiana ao amin'ny Matio 5,21: 32), na tsy mitombina (Ny fampianaran'i Mosesy momba ny fianianana ao amin'ny Matio 5,33: 37), na ny fiheverany ny fitondran-tena (Ny fampianaran'i Mosesy momba ny fahamarinana sy ny fitondran-tena amin'ny fahavalo ao amin'ny Matio 5,38: 48).
Ao amin'ny Matio 6 dia mitondra ny Tompontsika, "izay mamorona endrika, ny atiny ary ny tanjon'ny finoantsika" (Jinkins 2001: 98) nanohy ny fanavahana ny kristianisma tamin'ny finoana.
Ny tena fiantrana [ny fitiavana] dia tsy mampiseho ireo zavatra tsarany ho fiderana, fa manompo tsy amim-pitiavana (Matio 6,1: 4). Ny vavaka sy ny fifadian-kanina dia tsy maodely amin'ny sarin'ny besinimaro fa amin'ny alalan'ny fihetsika manetry tena sy masina (Matio 6,5: 18). Izay tadiavintsika na ho azontsika dia tsy ny tanjona na ny fiahian'ny fiainana. Ny zava-dehibe dia ny fitadiavana fahamarinana izay natombok'i Kristy tao amin'ny toko teo aloha (Matio 6,19: 34).
Nifarana tamin'ny toriteny ny toriteny tamin'ny Matio 7. Ny Kristiana dia tsy tokony hitsara ny hafa amin'ny hitsara azy ireo satria mpanota (Matio 7,1: 6). Andriamanitra Raintsika te-hitahy antsika amin'ny fanomezana tsara, ary ny tanjona ao ambadiky ny kabary nataony tamin'ny lalàna taloha sy ny mpaminany dia ny hitondrantsika ny hafa tahaka ny tiantsika hitondrana antsika. (Matio 7,7: 12).
Ny fiainan'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny manao ny sitrapon'ny rainy (Matio 7,13: 23), izay midika hoe mihaino sy manao ny tenin'i Kristy (Matio 7,24:17,5;).
Ny fandresenao ny zavatra inoanao amin'ny zavatra hafa ankoatra ny lahateninao dia ny fananganana trano eo amin'ny fasika izay hirodana rehefa tonga ny tafiotra. Ny finoana mifototra amin'ny lahatenin'i Kristy dia toy ny trano naorina teo ambony vatolampy, teo amin'ny fototra mafy orina izay afaka mahatanty ny fotoam-pitsapana (Matio 7,24: 27).
Nanaitra ny mpihaino tokoa io fampianarana io (Matio 7,28: 29) satria ny lalàn'ny Testamenta Taloha dia noheverina ho fototra sy vatobe nanorenan'ny Fariseo ny fahamarinany. Nilaza i Kristy fa ny mpanara-dia azy dia tokony hihoatra izany ary hametraka ny finoany eo aminy irery ihany (Matio 5,20). Kristy, fa tsy ny lalàna, no vatolampy nihira an'i Mosesy (Deoteronomia 5; Salamo 32,4; 18,2 Korintiana 1). «Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy; ny fahasoavana sy ny fahamarinana dia tonga tamin'ny alàlan'i Jesosy Kristy » (Jaona 1,17).
Tsy maintsy hateraka indray ianao
Raha tokony hanitatra ny lalàn'i Mosesy izay ny an'ny raby (Mpivavaka amin'ny jiosy jiosy) nantenaina, Jesosy dia nampianatra zavatra hafa noho ny Zanak'Andriamanitra. Nanao fanamby ny eritreritry ny mpihaino sy ny fahefan'ny mpampianatra azy izy ireo.
Lasa lavitra izy vao nanambara hoe: "Mikaroka ao amin'ny Soratra Masina ianareo satria mihevitra fa manana fiainana mandrakizay ao amin'izy ireo; ary izy no manambara ahy; nefa tsy te-hanatona ahy ianao fa manana fiainana » (Jaona 5,39-40). Ny fandikana marina ny Testamenta taloha sy Vaovao dia tsy mitondra fiainana mandrakizay, na dia aingam-panahy aza izy ireo hahafahantsika mahatakatra ny famonjena sy ny maneho ny finoantsika. (raha dinihina ao amin'ny Fianarana 1). Mila manatona an'i Jesosy isika hahazoantsika fiainana mandrakizay.
Tsy misy loharanom-panampiana hafa. Jesosy dia "làlana sy fahamarinana ary fiainana" (Jaona 14,6). Tsy misy lalana mankany amin'ny ray raha tsy amin'ny alàlan'ny zanakalahy. Ny famonjena dia misy ifandraisany amin'ny fahatongavantsika amin'ilay olona fantatra hoe Jesosy Kristy.
Ahoana ny fomba ahatongavantsika amin'i Jesosy? Ao amin'ny Jaona 3, Nikodemosy dia nankany amin'i Jesosy amin'ny alina hahalala bebe kokoa momba ny fampianarany. Gaga i Nikodemosy raha hoy i Jesoa taminy: "Tsy maintsy hateraka indray ianao" (Jaona 3,7). "Ahoana no mety hitranga?" hoy i Nikodemosy, "moa afaka niteraka indray ve ny renintsika?"
Jesosy dia niresaka momba ny fanovana ara-panahy, ny famerenan'ny taonan'ny hery miavaka, nateraka avy "ambony", izay fandikana ny teny grika "indray" ao amin'ity fizarana ity. «Satria tia an'izao tontolo izao Andriamanitra, dia nomeny ny Zanany lahitokana, ka izay rehetra mino azy dia tsy ho very fa hanana fiainana mandrakizay» (Jaona 3,16). Nanohy ireto teny ireto i Jesosy: "Izay mandre ny teniko ka mino Izay naniraka ahy dia manana fiainana mandrakizay" (Jaona 5,24).
Manam-pinoana io. Jaona Mpanao Batisa dia nilaza fa izay mino ny zanaka dia manana fiainana mandrakizay (Jaona 3,36). Ny finoana an'i Kristy no teboka fanombohana "hateraka indray tsy avy amin'ny voa mety simba fa mora simba (1 Petera 1,23), fiandohan'ny famonjena.
Ny mino an'i Kristy dia midika hoe mihevitra i Jesosy fa "ilay Kristy, Zanak'Andriamanitra velona" (Matio 16,16:9,18; Lioka 20: 8,37; Asan’ny Apostoly), izay “manana ny tenin’ny fiainana mandrakizay” (Jaona 6,68-69).
Ny mino an'i Kristy dia midika hoe mihevitra i Jesosy fa Andriamanitra izay
Tonga nofo ary niara-nonina tamintsika (Jaona 1,14).
nohomboana tamintsika fa "tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia tokony hanandrana ny fahafatesana ho an'ny olona rehetra izy" (Hebreo 2,9).
«Efa maty ho an'ny rehetra, ka tsy honina intsony ny olona monina ao fa ho an'ireo izay maty sy nitsangana ho azy ireo» (2 Korintiana 5,15).
«Maty indray mandeha ny ota» (Romana 6,10) sy «izay ananantsika fanavotana, dia ny famelan-keloka» (Kolosiana 1,14).
«Maty ary tonga velona indray fa tompon'ny maty sy ny velona» (Romana 14,9).
"Izay eo ankavanan'Andriamanitra, dia niakatra any an-danitra; ary ny anjely sy ny mahery ary mahery dia manaiky azy" (1 Petera 3,22).
Nampakarina ho any an-danitra "ary" ho avy indray "rehefa" niakatra ho any an-danitra izy " (Asan’ny Apostoly 1,11).
«Hitsara ny velona sy ny maty amin'ny endriny sy ny fanjakany» (2 Timoty 4,1).
«Hiverina ety an-tany handray ny mpino» (Jaona 14,1 4).
Amin'ny fanekena an'i Jesosy Kristy amin'ny finoana rehefa naneho ny tenany Izy dia "ateraka indray".
Mibebaha, ary ataovy batisa
Jaona Mpanao Batisa dia nanambara: "Manenina, ary minoa ny filazantsara" (Marka 1,15)! Jesosy dia nampianatra fa izy, ny Zanak 'Andriamanitra sy ny Zanak' olona, ​​dia "manam-pahefana hamela heloka eto an-tany" (Marka 2,10:9,6; Matio). Ity no filazantsara izay nirahin'Andriamanitra ny Zanany hamonjy izao tontolo izao.
Ny fibebahana [fibebahana] dia nampiditra an'io hafatra momba ny famonjena io: "Tonga hiantso ny mpanota aho fa tsy ny marina" (Matio 9,13). Mampikorontana i Paoly: "Tsy misy olona manao ny marina, na iray akory aza" (Romana 3,10). Mpanota daholo isika izay miantso ny fibebahana i Kristy.
Ny fibebahana dia antso miverina amin'Andriamanitra. Raha ny ara-bakiteny dia ara-dalàna ny maha-olombelona fa tafasaraka amin'Andriamanitra. Tahaka ny zanaka amin'ny tantaran'ny zanaka adala ao amin'ny Lioka 15, ny lehilahy sy ny vehivavy dia nanalavitra an'Andriamanitra. Tahaka ny nasehony tamin'ity tantara ity, dia matahotra ny hiverenantsika any aminy ny raim-pianakaviana. Ny fanalavirana ny tena amin'ny ray no fiandohan'ny ota. Ny fanontaniana momba ny ota sy ny andraikitra kristiana dia ho resahana amin'ny fampianarana Baiboly amin'ny ho avy.
Ny fomba tokana mankany amin'ny ray dia amin'ny alàlan'ny zanakalahy. Hoy i Jesosy: «Ny raiko rehetra dia nomen'ny raiko; ary tsy misy mahalala tsara ilay zanaka lahy afa-tsy ny ray ihany; ary tsy misy mahalala ny rainy afa-tsy ny zanakalahy sy izay tian'ny zanany hasambarana » (Matio 11,28). Ny fiandohan'ny fibebahana noho izany dia mitoetra amin'ny fialana amin'ireo lalana fantatra ho amin'ny famonjena sy ny fitodihana any amin'i Jesosy.
Ny fanekena an'i Jesosy ho Mpamonjy, Tompo ary Mpanjaka ho avy dia voaporofo amin'ny lanonana fanaovana Batisa. Nasain'i Kristy natao batisa ny mpianany "amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina". Ny Batisa dia fanehoana ivelany fa adidinao anaty ny manara-dia an'i Jesosy.
Ao amin'ny Matio 28,20 dia nanohy i Jesosy hoe: “… ary ampianaro hitandrina izay rehetra nandidiako anao izy. Ary jereo, Izaho momba anao isan'andro mandra-pahatongan'ny fahataperan'izao tontolo izao ». Ao amin'ny ankamaroan'ny ohatra ao amin'ny Testamenta Vaovao dia manaraka ny foto-pinoana aorian'ny batemy. Mariho fa Jesosy dia nilaza mazava fa namela didy ho antsika izy, araka ny nohazavaina tao amin'ny Toriteny teo An-tendrombohitra.
Mitohy ny fibebahana eo amin'ny fiainan'ny mpino rehefa manatona an'i Kristy. Ary araky ny nolazain'i Kristy dia homba antsika hatrany hatrany. Fa ahoana? Ahoana no ahafahan'i Jesosy miaraka amintsika ary amin'ny fomba ahoana no hisehoan'ny fibebahana manan-danja? Ireo fanontaniana ireo no horesahina amin'ny fandehany manaraka.
Nanazava i Jesosy fa tenin'ny fiainana ny teniny ary mitaona ny mpino izy ireo amin'ny fampahafantarana azy ny lalana mankany amin'ny famonjena.